Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Oo Sheegay Iney Qabsandoonaan Magaalada Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Oo Sheegay Iney Qabsandoonaan Magaalada Muqdisho.
Abiye Axmed oo ah ra’iisul wasaaraha Itoobiya ayaa markale sheegay hadal yaab leh oo muujinaya cadaawada fog ee ninkan iyo shacabkiisu u hayaan Shacabka Muslimka ah ee Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya oo la hadlayay qowmiyad lagu magacaabo Uraago oo kamid ah qowmiyadaha dalka Itoobiya dega ayaa sheegay iney doonayaan iney Qabsadaan magaalada Muqdisho, oo ay ka dhigaan magaala hoostimaada Adis-Ababa.
Nin u hadlayay qowmiyadda ayaa Ra’iisul wasaaraha ka codsaday in qowmiyada Uraagada la siiyo madax banaani gaar ah, waxaana markaas Ra’iisul wasaaraha itoobiya ugu jawaabay ineysan taasi macquul ahayn oo ay tahay in meesha laga saaro in qowmiyad kasta ay ka fakarto gobolkeeda oo keliya.
Wuxuu yiri Ra’iisul wasaaraha isagoo ka jawaabaya hadlakaas yiri “ka gudub halkan soke ee aad ka fakareyso, waxaanu dooneynaa marka aan Muqdisho furano inaad Sabti iyo Axad intaad kasoo shaqeysaan aad kasoo noqotaan”.
Isagoo sii hadlaya Abiye Axmed wuxuu yiri “ Yaa ka shaqeynaya markan Muqdisho furano, anagu halkaas ayaan ka fakareynaa”.
Abiye Axmed ayaa dhawaan booqasho ku yimid magaalada Muqdisho, wuxuuna shaaca ka qaaday markii uu ku laabtay Itoobiya in Soomaaliya iyo Itoobiya ay isku biirayaan, islamarkaana noqonayaan hal dowlad.
Shacabka Soomaaliyeed ayay la gudboontahay inta ay goori goortahay iney ilaashadaan madax banaanida wadankooda, islamarkaana ka hortagaan damacyada iyo daan-daanshiga Xabashida.